ခရစ်တော်နှင့် ထိတွေ့ကြသူများ | Shwe Canaan TV
10Truth Saturday, 27 February 2016
မေတ္တာဟူသည် လူသားတို့၏နှလုံး သားအတွင်း မှပေါ်ထွက်လာသောခံစားချက်ဖြစ်သည်။ မေတ္တာရှိမှသာလူ တစ်ဉီးနှင့် တစ်ဉီးပေါင်း ဖက်၍ သဟာ ယပြုနိုင်သည်။ တပ်...
မေတ္တာဟူသည် လူသားတို့၏နှလုံး သားအတွင်း
မေတ္တာရှိမှသာလူ တစ်ဉီးနှင့် တစ်ဉီးပေါင်း ဖက်၍
သဟာ ယပြုနိုင်သည်။ တပ်မက်ခြင်းသည် မေတ္တာ
မဟုတ်ပါ။ တပ်မက်ခြင်းစွဲ လမ်းခြင်းဖြစ် လာပြီး
ထိုစွဲလမ်းခြင်းမှ တဏှာသို့ကူးစက် သွားသည့်
အခါ မင်္ဂလာမဖြစ်ဘဲ အမင်္ဂလာ အကျိုးကွင်းဆက်
ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်သည် သာမက မေတ္တာရှင်ဖြစ်သည်။ ထိုပြင် အရာခပ်သိမ်းကို တပ်စွမ်းသော အနန္တတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အရှင်လည်းဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားရှင်သည် လူသားတိုင်းကိုတရားမျှတစွာဖန်ဆင်းထားသည်။ တစ်ဉီးကိုရုပ်ဆိုး၍ တစ်ဉီးကို ရုပ်လှစေရန် သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ဉီးကိုပိန်၍ တစ်ဉီးကိုဝစေဖို့ရန်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ကိုလိမ္မာ၍တစ်ဉီးကိုမိုက်မဲဖို့ရန် သော်လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်မဖန်ဆင်းထားပါ။ ထိုသို့ကွဲပြားခြားနား၍ အခြေအနေမတူခြင်းမှာ ဘုရားရှင်၏လုပ် ဆောင်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ပါ။ လူတစ်ဉီးစီ၏ မိမိသဘောကျရွေးချယ်အသက်ရှင်မှုကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားရှင် သည် လူသားများ၏အတွက် အကောင်းဆုံးကိုသာလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ လူသားများ၏အပြစ်အတွက် ကားတိုင် ထက်တွင် အေသခံ၍ အပြစ်ကြွေးကိုပေးဆပ် ရုံမွ်မက သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါ သည်။ ယနေ့ ခရစ်တော် အသက်ရှင်ကြောင်း သက်သေရလိုပါက နှလုံးသားမှတမ်းတ၍မြည်း စမ်းခေါ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုပါက ကိုယ်တော်သည် အသက်ရှင်၍ ကောင်းမြတ်တော် မူသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို လက်တွေ့သက်သေ ခံစား ရပေလိမ့်မည်။
(လု၊ ၇း၁-၁၀)တွင် တပ်မှူးတစ်ဉီးရှိသည်။ သူသည်ခရစ်တော်၏သတင်း ကိုကြားသိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူ ယနေ့ခရစ်တော် ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းသတင်း စကားကိုကြားသိသူများစွာပါရှိသည်။ ကောင်းသည့်သတင်း စကားသည် ကြားသိရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ ကြားသည့်အတိုင်း လက်တွေ့မြည်း စမ်းကြည့်ဖို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြင်ဆင်ရာတွင် ရံဖန်ရံခါ လူ့သဘာဝ ရုပ်စိတ်အရ ကောင်းသည်ဟုမမြင်သလို မခံစားနိုင်သောအခြေအနေများ လည်းရှိပါသည်။ တပ်မှူး သည်ကိုယ်တော်၏ ကောင်းမြတ်ကြောင်းသတင်းကိုမြည်းစမ်းနိုင်ဖို့ရန် သူချစ်သောငယ်သား တစ်ဉီးသည် ဖျားနာ၍ သေလုနီးပါးအခြေအနေတွင်ရှိပါသည်။ တပ်မှူးသည် ကိုယ်တော်ထံသို့လူ ကိုစေလွှတ်၍ မိမိကျွန် အားချမ်းသာပေးရန် ကြွလာပါမည် အကြောင်းတောင်း ပန်ခဲ့ပါသည်။ တပ်မှူးသည်ကိုယ်တော်၏ ကောင်းချီးကို ခံစးရရန် လူ့သဘာဝအတွေး၌ မဆီလျော်ဟု ထင်မြင်ရသော အခြေအနေအားဖြင့် ကိုယ်တော် ကပြင် ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။
တပ်မှူး၏အကူအညီတောင်းခံမှုကို ကိုယ်တော်သည်လက်ခံ၍ သူ့ထံသို့ကြွလာပါသည်။ သူ့အိမ်နှင့်မနီးမဝေး သို့ ရောက်သောအခါ တပ်မှူးသည်မိမိအဆွေတို့ကိုစေလွှတ်၍၊ ကျွနု်ပ်၏အိမ်အမိုးအောက် သို့ကြွဝင် ခြင်းကျေးဇူးကို မခံထိုက်ပါ။ ကိုယ်တော့်အမိန့်တော်တစ်ခွန်းရှိလျှင် ငယ်သားသည်ချမ်း သာရလိမ့်မည်ဟု လျှောက်ထားစေပါသည်။ တပ်မှူး၏အသက်တာကိုဆင်ခြင်ကြည့်ပါက သူသည်တပ် မှူးဖြစ်သော်လည်း နှိမ့်ချသာ သေဘာရီ ရုံသာမက ကိုယ်တော် ကိုရိုသလေးစားပြီး ဉီးထိပ်ထားသော သူဖြစ်ကြောင်းကျွနု်ပ်တို့သိနိုင်ပါသည်။
ယနေ့မိ ရိုးဖလာ ခရစ်ယာန်မြောက် များစွာတို့သည် ကိုယ်တော်၏နာမတော်အား ရိုသေလေးမြတ်ခြင်း ရှိရမည်ကို သိလျက်နှင့် ရိုသလေးမြတ်ခြင်းမရှိဘဲ အသက်ရှင်နေကြသည်။ တပ်မှူးသည် ခရစ်ယာန်မ ဟုတ္သလို ယုဒလူလည်းမဟုတ် ပါ။ တစ်ပါးအမျိုးသား သက်သက်သာဖြစ်သည်။ သို့သော် နှလုံးသားနှင့် ကိုယ်တော်ကို ရိုသေလးစား၍ ယုံကြည်ကိုးစား သူဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် နှလုံးသားနှင့်ကိုး စားတောင့်တမှု ကိုသိမြင်တော်မူသော အရှင်ဖြစ်၍ တပ်မှူး၏ ယုံကြည်ခြင်း အားအသိအမှတ်ပြုကာ မိမိ၏နောက်တော်သို့ လိုက်သော သူများအား ဤမျှလောက်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကိုးစားသောသူကို ဣသေရလ အမျိုး၌မိမိမတွေ့ ဘူးသေးကြောင်း မိန့်တော်မူ ပါသည်။ တပ်မှူး၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကြောင့် သူ၏ငယ်သားသည် အနာမှထမြောက်၍ ကျန်းမာခြင်းကျေးဇူးကို သခင်ဘုရားထံမှခစားခဲ့ရပါသည်။
ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားသည် စကားသက်သက် မဟုတ်ပါ။ တန်ခိုးနှင့်တွဲဖက်၍ ကိုယ်တော်ရှင် ကိုယ်တော် တိုင်ကသက်သေ ထူပြီး လက်တွေ့ ကျသည့်ခံစား ချက်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခရစ်ယာန်များစွာ တို့သည် ကိုယ်တော် အသက်ရှင် ကြောင်းလက်တွေ ့သက်သေမရှိဘဲစကားသက် သက္ကိုသာ ကြားနေကြရ သည်မှာ ဝမ်းနည်း ဖွယ် ကောင်းလှပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အသက္တာ ၌ကြုံတွေ့ကြရ သည့်အခက် အခဲပြဿဿနာ များ၌ ကိုယ်တော့် ကိုနှလုံးသား နှင့် မြည်းစမ်းကိုစား မှုမရှိ၍ဖြစ်သည်။
ပြဿနာအခက် အခဲကြုံသည့်အခါ လူ့နည်းလူ့ဟန်ဖြင့်သာ ဖြေရှင်းနေကြသည်။ ခရစ်ယာန်မ ဟုတ်သော်လည်း ကိုယ်တော်အသက် ရှင်၍အရာခပ်သိမ်းကို တတ်စွမ်းနိုင်ကြောင်းကြားရ ရုံဖြင့် အခက်ခဲ ပြဿနာကြုံ သည့်အ ခါနှလုံး သားနှင့်ကိုယ်တော်ကို တမ်းတအော်ဟစ်မှုကြောင့် လက်တွေ့သက်သေ ရရှိခံစားကြရသူများ စွာရှိပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် မည်သူ့ကိုမျှ မျက်နှာမလိုက်ပါ။ သို့သော်နှလုံး သား၏ တောင့်တမှု ကိုမူသိရှိတုန့်ပြန် ကာမစကူ ညီသော ဘုရားဖြစ်သည်။
ယနေ့အချိန်ကာလ၌၊ ကျေးဇူးပြုသော သူများကို ကျေးဇူးပြုခြင်းခံ ရသူများက ကျေးဇူးကို မသိမမှတ်ဘဲ၊ ကျေးဇူး ကနးကြသော သူများစွာရှိကြောင်း ကျွနု်ပ်တွေ့ရပါသည်။ သခင်ခရစ်တော်ထံသို့ အတိတ္ကအ ကျင့်ဆိုးကို ကျင့်ကြံခဲ့သော အမျိုးသမီး တစ်ဉီးရောက် လာပါသည်။ သူသည်တစ်ချိန် ကဆိုး ခဲ့သော်လည်း ကိုယ်တော်၏ ကျေးဇူး ကြောင့်နောင်တရကာ မိမိ၌ရှိသော ဆီးမွှေးကျောက်ဖြူခွက်ဖြင့် ကိုယ်တော့် အားကျေးဇူး တုန့်ပြန်ဖို့ရန် ရောက်လာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းမ၏ နှလုံးသား မှကျေးဇူး တင်သော သဘောဖြင့်ပြု သည့်အမှုကို ကိုယ်တော်အား ခေါ်ဖိတ်သော ဖါရိရွဲ ကမသိပါ (လု၊ ၇း၃၇)။
ကိုယ်တော် ၏ကျေးဇူးပြုမှုကို ခံစားရပြီး နှလုံးသားမှကျေးဇူးတင်သော သဘောဖြင့်တုန့်ပြန်မှုတိုင်းကို ကိုယ်တော်က သိမှန်၍လက် ခံပါသည်။ ထိုနည်းတူကျွနု်ပ်တို့ဉည်လည်း ယခုဘဝ၊ နောင်ဘဝအတွက် အပြစ်ခွင့်လွှတ် ခြင်းနှင့် အာမခံ ချက်ကိုကိုယ်တော် ထံမှရရှိခံစားကြရ သူများပီပီ ကိုယ်တော်၏ ကျေးဇူးတရား ကိုသိမှတ်လျက် အသက်တာသစ်၌ ကိုယ်တော်၏ စကားတော် ကိုနာခံခြင်းဖြင့် အသက်ရှင် သင့်ကြပေသည်။
(တ၊၁၀)တွင်ခရစ်ယာန် မဟုတ်သော တပ်မှူးတစ်ဉီးကို တွေ့ရသည်။ သူသည် ဘုရားရှင် ကိုမသိသော်လည်း ဘုရားကိုရည်စူး ၍ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသည်သာမက လူတို့အားများ စွာသောစွန့်ကြဲခြင်းကိုပြုသည်။ ထို့အပြင်ဘုရားကို ရည်စူး၍ အစဉ် ဆုတောင်းကြောင်းတွေ့ရ သည်။ သူ၏နှလုံးသားမှဘုရား ကိုရည်စူး၍ ပြုတော်မူသောအမှုကို ဘုရားရှင်သည်သိမှတ် ၍သူ့အား အတွေ့ခံခဲ့ပါသည်။ ဘုရားရှင်သည် မျက်နှာမလိုက်ပါ။ ဘုရားသခင် ကိုရည်စူး၍ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းအမှု၊ ကူညီမစေသာ အမှုရှိသမျှကို ဘုရားရှင်သိမှတ်၍ ကောင်းချီးပေးပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ ကျွနု်ပ်တို့ ၏အသက် တာ၌ ကိုယ်တော်ကိုမသိမမြင်။ ကိုယ်တော်၏သက်သေ ကိုမခံစားရသေးဘဲဖြစ် နေလျှင် နှလုံးသားနှင့် ကိုယ်တော် ကိုတမ်းတ မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။ ကိုယ်တော်ကမိမိအသက်ရှင်ကြောင်း သက်သေထူ၍ မစ ကူညီပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်၏ကျေးဇူးပြုသက်သေထူမှုကို အသက္တာ၌ခံစားရပါက ကျေးဇူးတင်သော သဘောဖြင့် ဆက်၍ ကိုယ်တော်ရှင်၏ အလိုတော်အတိုင်းနာခံအ သက်ရှင်ပါက အသက္တာ၌ ထူးကဲသောအတွေ့ အကြုံနှင့်ကောင်းချီး မင်္ဂလာ အမျိုးမျိုးကို ခံစားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း မေတ္တာနှင့် အသိပေးဝေငှ လိုက်ရပါသည်။
Unknown4April 2022 at 15:14
Casino. Wynn isa$4 billion ventureberg.com/ resort with four hotel towers with 5,750 토토 사이트 rooms www.jtmhub.com and suites. Each herzamanindir.com/ of the hotel towers 메이피로출장마사지 includesa20,000 square foot casino and a
Shwe Canaan TV: ခရစ်တော်နှင့် ထိတွေ့ကြသူများ